FAMETRAHANA FILAMINANA MAHARITRA ETO MADAGASIKARA : Tafita amin’ny dingana faharoa i Madagasikara
Ho fametrahana fitoniana maharitra eto Madagasikara dia nanatanteraka fivoriana tamin’ny talata lasa teo ny komity mitantana ireo tetikasa vatsian’ny firenena mikambana eto Madagasikara. 12 avril 2019
Ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian no nitarika ny fivoriana tamin’izany ary natrehin’ny solotena maharitry ny firenena mikambana, miasa sy monina eto Madagasikara, Ramatoa Violette Kakyomya. Ity no fivoriana faha-11 ho fametrahana fitoniana maharitra eto Madagasikara.
Raha ny fantatra dia mandalo sivana manokana ny fahazoana ity famatsiana avy amin’ny firenena mikambana ity ary efa hatramin’ny taona 2014 no nanomboka ny fandinihana ny momba an’i Madagasikara. Voafidy ny taona 2015 ho isan’ireo firenena afaka misitraka ity i Madagasikara ary niatomboka tamin’ny taona 2016 ny fanatanterahana ireo tetikasa, izay miasa amina sehatra mahakasika ny paikady, toy ny fanatsarana ny fitantanana, ny fanavaozana ny sehatry ny fandriampahalemana, ary ny fifehezana ny tsy fahatomombanana mikasika ny faritra atsimon’i Madagasikara.
Tafiditra ao anatin’ny vaindohan-draharahan’ny governemanta ankehitriny ny famerenana ny fandriampahalemana sy ny fitoniana, hoy ny Praiminisitra ary nambarany fa : « Isika eto Madagasikara dia misitraka ny “fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix” ; natokana hijerena ny ezaka rehetra tokony hatao, indrindra ny amin’ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana any amin’iny Faritra Atsimon’i Madagasikara iny ».
Isan’ny voaresaka tamin’io fivoriana tamin’ny talata teo io ihany koa ny mahakasika ireo tetikasa rehetra izay natomboka sy ny vokatra azo tamin’izany, ny fanatsarana izay mbola tokony hatao mba hahafahana mampitombina hatrany ny vokatra azo ary ny fandinihana sy famondronana ireo no namaranana ny dingana voalohany amin’ izao famatsiana izao. Ho an’ny dingana faharoa indray kosa, hoy hatrany ny Praiminisitra, dia mahatsapa ireo mpiara-miombon’antoka fa misy ny ezaka eo amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin’ny ankapobeny toy ny ady atao amin’ny kolikoly ary indrindra eo amin’ny fametrahana ao anatin’ny fotoana fohy ny mahakasika ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Amin’ity faran’ny volana avrily ity moa no hanatanterahana ny atrikasa handinihana ny dingana vaovao hirosoana amin’ny fanatanterahana ny fisitrahana ny famatsiana andiany faharoa.
Notsipihin’ny lehiben’ny governemanta ihany koa fa ireo dia tafiditra ao anatin’ny famatsiam-bola manokana avy amin’ny Firenena Mikambana ary ny sekretera jeneraliny eo anivon’ny Firenena Mikambana manokana mihitsy no nisafidy an’i Madagasikara hanome ny dingana faharoa ka ilaina ny fandaminana haingana izany.
Handrangotra voasary "Pamplemousse Fc" avy atsy Maorisy ny Fosan’i Boeny KITRA (436) 18 octobre 2019 Hanakorontana ireo andian’olona voakarama TETIKASA TANAMASOANDRO (166) 17 octobre 2019 Polisy miisa roa tratra nanao kolikoly SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO (97) 17 octobre 2019 Roa maty voatifitra, telo azo sambo-belona AMBALAKINDRESY - DAHALO NANAFIKA (90) 15 octobre 2019 Mpandeha miisa 3 naratra mafy vokatry ny tandrevaky ny mpamily LOZAM-PIFAMOIVOIZANA RN 12 (90) 17 octobre 2019 Orinasa tratra nampiasa zaza tsy ampy taona no tsy manaja ny zon’ny mpiasa ORINASA IRAY ENY AMPANGABE (85) 15 octobre 2019